ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတဲ့ လမ်းပျောက် လူငယ်များ အတွက် - ၁ - Saya Zin
ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေတဲ့ လမ်းပျောက် လူငယ်များ အတွက်
” အကို ရေ တကယ် ကို ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတာ ပါ ။ အရင် အလုပ်တွေမှာလည်း ၂ နှစ် စီလောက် လုပ်ခဲ့ဖူးတယ် ။ ဒါပေမယ့် စိတ်မပါသလို ဖြစ်လာတော့ ထွက်ပြီး နောက်အလုပ်ပြောင်းတယ် ။ ခဏပဲ ခံတယ် ။ စိတ်ထဲမှာ ဒီ အလုပ်ကလည်း ကိုယ့် အတွက် မဟုတ်သလို ခံစားလာရပြန်ရော ။ အခု အကို့ စာတွေ ဖတ်မိတော့ ကိုယ် တကယ် စိတ်ပါ ဝင်စားတာကို လုပ်ဖို့တော့ စိတ်ကူးရတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဓိက ပြသနာက ကိုယ် တကယ် စိတ်ပါ ဝင်စားတာက ဘာမှန်းကို မသိတော့တာပါ ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာလုပ်ချင်နေမှန်း / ဘာဖြစ်ချင်နေမှန်းကို မသိတော့တာပါ ။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ အကြံပေးပါဦး အကို ။ “
ကျွန်တော့် ဆီ ဖုန်းဆက်လာတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ စကားသံတွေပါ ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း ရုတ်တရက် ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိ ဖြစ်သွားတယ် ။ ဟုတ်တယ်လေ ။ ကျွန်တော်တို့က လူငယ်တွေကို “ ကိုယ် တကယ် စိတ်ပါ ဝင်စားတာကို လုပ်ဖို့” စာတွေ ရေးပြီး အကြံပေးကြတယ် ။ လူငယ် တစ်ချို့ ဖတ်မိပြီး အဲ့ဒီ အကြံကို လိုက်နာဖို့ ကြိုးစားတယ် ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကြတော့ လိုက်နာဖို့မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာလုပ်ချင်နေမှန်း / ဘာဖြစ်ချင်နေမှန်းကို မသိတော့တာ နဲ့ တင် တစ်နေပြန်ရော ။ ဒါ တစ်ယောက် တည်း မဟုတ်ဘူးနော် ။ အတော် များများပဲ ။ ၃ ပုံ တစ်ပုံ မဟုတ်ရင် တစ်ဝက် လောက်တောင် ရှိမလားပဲ ။
သူတို့ အဲလို ကျွန်တော့်ကို မေးလာတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ငယ်ငယ်က တက်ကျမ်း တွေ စဖတ်တုန်းက အချိန်ကို ပြန်စဉ်းစားမိတယ် ။ဟုတ် ပ ။ ကျွန်တော်တို့လည်း အဲလိုတွေ ခံစားခဲ့ရတာပဲ ။ အခုမှသာ ကိုယ် လုပ်ချင်တာ ကိုယ် ဖြစ်ချင်တာတွေကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ တိတိကျကျ သိပြီး လုပ်နေ … အကောင်အထည်ဖော်နေရင်း လမ်းခုလတ်မှာ ပျော်နေတာ ။ အဲ့ဒီ အချိန်တုန်းက ဘာလုပ်ရမှန်း ကိုယ်လည်း ရုတ်တရက် မသိခဲ့တာပဲ ။
ဖုန်း ဆက်လာတဲ့ လူငယ်လေးကို မိနစ် ၂၀ လောက် သေချာ အမေးအဖြေလုပ်ပြီး စကားပြောပေးလိုက်မိတယ် ။ လုပ်လို့ ရနိုင်တာတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ပြောပြပေးတာပေါ့ ။ သူကလည်း ဒါတော့ လုပ်ဖူးတယ် ။ ဒါပေမယ့် အလုပ်မဖြစ်ဘူး ။ ဘာကြောင့် ? ဘယ်လို ? ဒါတော့ လုပ်မကြည့်ရသေးဘူး ။ လုပ်ကြည့်ပါမယ် စသဖြင့် ပြန်ဆွေးနွေးတာပေါ့ ။ နောက်တော့ သူ လိုချင်တာ အတိုင်းအတာ တစ်ခု ရသွားလို့လား ? ကျွန်တော့် ကိုပဲ အားနာလို့လားမသိ ကျွန်တော် အကြံပေးတာတွေ လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ့မယ်လို့ ပြောပြီး ဖုန်းချသွားတယ် ။
သူကသာ ဖုန်းချသွားတာ ။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲမှာ ဖုန်းက ကျ မသွားဘူး ။ သူ့ကို ပြောလိုက်တဲ့ ကျွန်တော့် ရဲ့ စကားတွေ / ကျွန်တော် ပေးလိုက်တဲ့ အကြံတွေကို ကျွန်တော် ကိုယ့် ဘာသာ ကိုယ် ပြန်သုံးသပ်နေမိတယ် ။ ကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာတွေထဲက ဟာတွေ / ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံတွေ ကို ပဲ သူ့ကို နိုင်သလောက် လက်ဆင့်ကမ်း လိုက်တာပါ ။ ကျွန်တော် နားလည်သလို လက်ခံထားသလို သူ့ကို ပြန်ပြောပြပေးရတာပေါ့ ။ သူ့ကို ကျွန်တော် ရှင်းပြ ပြောပြခဲ့တဲ့ အကြောင်း စဉ်းစားနေရင်းနဲ့မှတော်တော်လေး ထိရောက်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော် ယုံကြည်မိတဲ့ နည်းလမ်း နဲ့ ရှင်းပြရမယ့် ပုံစံလေး တစ်ခု ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲကို ရောက်လာတယ် ။
ထူးခြားတာက ဒီ အတွေးနဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံလေးက ကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာတွေထဲက ပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး ။ ကျွန်တော် ခေါင်းထဲ လင်းကနဲ ဖြစ်ပြီး အတော်လေး ပျော်သွားမိတယ် ။
C , Am , F , G ထဲက ပထမဆုံး ခွဲထွက်လိုက်နိုင်တဲ့ ဂီတသမားတစ်ယောက်ရဲ့ ပီတိမျိုး ပေါ့ … 🙂
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ရှာတွေ့လိုက်တဲ့ နည်း စနစ်လေး တစ်ခု လူငယ်တွေ အတွက် ပေးလိုက်နိုင်တော့မှာပါလားလို့ တွေးမိရင်းပေါ့ ။ ဒီလို နဲ့ ပဲ ဒီ ဆောင်းပါးလေး ခင်ဗျားတို့ ရှေ့ ရောက်လာတော့ တာပါပဲဗျာ ။ 🙂
စကားအပြန်အလှန်ပြောဟန်လေးနဲ့ ပြန်ရေးပြရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေမယ်ထင်လို့ ဒီ ဟန်ကိုပဲ သုံးလိုက်ပါတယ် ။
၁ ။ ဝါသနာ ကို ဘယ်လို ရှာ ရ မှာ
” ဒီလို စဉ်းစားကြည့်ကွာ ညီရာ … ညီ အခုလောလောဆယ် ကိုယ် တကယ် လုပ်ချင်တာ ဖြစ်ချင်တာ ဘာလဲဆိုတာ မသိရင် ညီ ဘာ ဝါသနာ ပါလဲ ? ဒါမှ မဟုတ် ကိုယ် ဘာကို စိတ်ဝင်စားသလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ သေချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါလား ? “
” အဲဒီ ဘာ ဝါသနာ ပါလဲ ဆိုတာကို ကို စဉ်းစားလို့ မရတာ အကို ။ ကျွန်တော် ထင်တာ ကျွန်တော်က ဘာမှ ဝါသနာ မပါသလိုပဲ ။ ဒီလို ပဲ သူများတွေ လုပ်တဲ့ ကောင်းမယ် ထင်တာလေးတွေ လိုက်လုပ်ကြည့်တယ် ။ ဒါပေမယ့် ကြာလာတော့ ပျင်းလာပြီး မလုပ်ချင်လို့ ရပ်ပစ်လိုက်မိတာပဲ ။ “
” အင် .. ဒါမှ ပြဿနာပဲ ။ အင်း လေ ဒါမျိုးဖြစ်နေတာ ညီ တစ်ယောက်တည်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ လူငယ်အတော်များများ အကို တွေ့ဖူးပါတယ် ။ အကို တို့ တုန်းကတော့ ကံကောင်းခဲ့တယ် ကွ ။ ကိုယ် လုပ်ချင်တာ ကိုယ် ဖြစ်ချင်တာ ဘာလဲ ဆိုတာကို ကိုယ် ကိုယ်တိုင် သိခဲ့တယ် ။ အခြေအနေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အဲဒီ ဟာကို ချက်ချင်း ရွေးချယ်ပြီး မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘဲ ပိုပြီး ဖြစ်သင့်မယ် ထင်တာ တစ်ခုကို ရွေးချယ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ရတယ် ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်မှာ ကိုယ် လုပ်ချင်တာ ကိုယ် ဖြစ်ချင်တာတွေကို ဖြစ်ခွင့်ရတော့မယ်လို့ ယုံကြည်မှု ထားပြီးတော့ လေ့လာစရာရှိတာတော့ လေ့လာနေခဲ့မိတယ် ။
အရမ်း ပင်ပန်းလို့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို တွဲပြီး တောင် မလေ့လာနိုင်တော့တဲ့ အခါမျိုးလည်း ရှိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တတ်နိုင်သလောက် စိတ်က အဲဒီလုပ်ချင် ဖြစ်ချင်တာကို စိတ်ကူးညွတ်နေ မြင်နေခဲ့မိတယ် ။ ဒါကြောင့်ပဲ အချိန်တန်တော့ ကိုယ် လုပ်သင့်တယ်ထင်ပေမယ့် မလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကို လုပ်စရာမလိုတော့ဘဲ ကိုယ် လုပ်ချင်တာတွေကိုပဲ အဓိက လုပ်နိုင်တဲ့ နေရာ … ဒါမှ မဟုတ် ကိုယ် လုပ်ချင်တာတွေနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးအရာတွေကို ရွေးလုပ်နိုင်တဲ့ နေရာကို ရောက်လာခဲ့တာပဲ ။
” အကို က တော့ ဟုတ်တာပေါ့ အကို ။ အကို လုပ်ချင်တာ ဖြစ်ချင်တာက အကို့ စိတ်ထဲမှာ ပြင်းပြင်းပြပြ ရှိနေတာကိုး ။ ကျွန်တော့် လို ဘာမှ စိတ်ထဲမှာ ရှိမနေဘဲ ယောင်လည်လည် ဖြစ်နေတာမျိုး ကျတော့ ဘယ်လို လုပ်မတုန်း “
” အဲဒီမှာ ညီ့ကို အကို တစ်ခု သတိပေးချင်တာ ရှိတယ် ။ ညီ့ စိတ်ကို ညီ သေချာ ပြန်ကြည့်ဖို့ပါ ။ ညီ လုပ်ချင် ဖြစ်ချင်နေတဲ့အရာကိုတကယ်ပဲ ရှာလို့ မတွေ့တာလား ? ဒါမှ မဟုတ် ညီ လုပ်ချင် ဖြစ်ချင်နေတဲ့အရာက လက်ရှိအခြေအနေမှာ ညီနဲ့ အလှမ်းဝေးလွန်းနေလို့ အဲဒါကို မလုပ်ချင်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးလို့ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ် ထင်လာအောင် လှည့်စားလိုက်မိတာလား ဆိုတာပေါ့ ။ အကိုတို့ ကိုယ်တိုင် လည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာတွေ ရှိလို့ ပြောတာပါ ။
တစ်ခါတလေ မှာ ဖြစ်တတ်တာက … အရာ တစ်ခုကို အကို တို့ လိုချင်တယ် ။ ဒါပေမယ့် မရနိုင်လောက်ဘူး လို့ထင်တယ်။ ဒါမှ မဟုတ် ရနိုင်အောင် လုပ်ရမယ့် ဟာတွေ / ပေးဆပ်ရမယ့် ဟာတွေကို ရှောင်ရှားချင်တယ် ။ ဒါနဲ့ ပဲ ဒီ အရာကို မလိုချင်ပါဘူး/ မလုပ်ချင်ပါဘူးလို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖြေတွေး တွေးတတ်လာတယ် ။ ကြာတော့ အဲဒီ ဖြေတွေးတွေက ကိုယ့် စိတ်ထဲမှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း စွဲထင်သွားပြီး တကယ်ပဲ အဲလို ယုံကြည်မိလာတယ် ။
အကို ပြောတာ ညီ သဘော ပေါက်ရဲ့လား မသိဘူး ။ အလွယ် ပြောရရင်တော့ မစားရတဲ့ စပျစ်သီးကို ချဉ်တယ်လို့ တွေးပါများရင်း စပျစ်သီးဟာ ချဉ်ပါတယ်ကွာလို့ တကယ်ပဲ စိတ်ထဲမှာ ယုံသွားတာ ။
ညီ့ စိတ်ထဲမှာ အဲလို ဖြစ်နေမှာ စိုးတယ် ။ ညီ ကိုယ့်ကိုကို သေချာ စဉ်းစား သုံးသပ်ကြည့်ပါဦး ။ မျက်စိမှိတ်လိုက် / အသက်ကို ဝအောင် ရှု / ပြီးရင် ဖြည်းဖြည်းချင်းစဉ်းစားကြည့် ။ ညီ့ရင်ထဲမှာ အဲလို အရာမျိုးတွေများ ရှိနေလား … ?
စိတ်ကို မြင်အောင်သေချာကြည့် ညီ ။ စိတ်ဟာ နဂိုက မူရင်း အချက်အလက်ထက် စာရင် စိတ်ထဲမှာ တွေးတာ ကြာတာကို ယုံသွားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ် ။ကိုယ့် စိတ်ကို ကိုယ် မြင်အောင် သေချာကြည့် ။ “
အလုပ် တစ်ခုခုကို လုပ်နေရင်းနဲ့ အချိန်ကုန်လို့ ကုန်သွားမှန်း မသိလိုက်တာမျိုး
လုပ်နေရင်းနဲ့ ဘာ ငွေကြေး အကျိုးအမြတ်မှ မရနေဘူးဆိုရင် တောင် လုပ်ရတာကို ပျော်နေတာမျိုး
မလုပ်ခင် ၊ လုပ်ဆဲ ၊ လုပ်ပြီးချိန်မှာတောင် ဒီ အလုပ်အကြောင်း တွေးပြီး ပျော်နေတာမျိုး / ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကျေနပ်နေတာမျိုး ဒါမျိုး ရှိသလား ? ဒါတွေဟာ ညီ့ ဝါသနာ ၊ ညီလုပ်ချင်ဖြစ်ချင်တာတွေ ပဲ ညီ ။
ညီ လွင် ဟာ ကျွန်တော် ပြောသလို မျက်လုံးကိုမှိတ် အသက်ကို မှန်မှန်ရှုရင်း ခဏကြာအောင် စဉ်းစားပါတယ် ။ သူ့ ကို ဒီအချိန်မှာ အာရုံပျံ့လွင့်မှာစိုးလို့ စကားတွေ ထပ်ပြောမနေဘဲ ဒီ အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေပေးလိုက်တယ် ။ ခဏကြာတော့ သူလည်း မျက်စိ ပြန်ဖွင့်လာပြီး ကျွန်တော့်ကို စကား ပြန် စပြောတော့တယ် ။
” အကို ပြောသလို စဉ်းစားကြည့်တော့ ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲကို ဝင်လာတာ တစ်ချို့တော့ ရှိတယ်ဗျ ။ ကျွန်တော် လုပ်ချင်တဲ့ ၊ လုပ်ရရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေတယ်လို့ ထင်တာလေးတွေပေါ့ ။ ဒီလို ခဏလေးစဉ်းစားတာတောင် နည်းနည်း ပေါ်လာရင် အချိန်ယူပြီး စဉ်းစားရင်တော့ ပို ပေါ်လာမှာပေါ့နော် အကို ။ “
” အင်း ဟုတ်တာပေါ့ ညီရ ။ ညီ အခု အကို့ဆီက ပြန်သွားပြီးရင် အိမ်မှာလည်း အေးအေးဆေးဆေး အချိန်ယူပြီး ပြန်စဉ်းစားဦး ။ ဘာလို့ဆို ဒီ အဆင့်က အရေးကြီးတယ် ။ ကိုယ် တကယ်ဘာလိုချင်တယ် ဘာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမှ ရှေ့ဆက် လုပ်စရာရှိတာတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဆက်လုပ်လို့ရမှာ ။ ဘယ်လို အရည်အချင်းတွေ ဖြည့်ဆည်းဖို့ လိုတယ် ။ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ တွေ့လာရင် ဘယ်လို ဖြေရှင်း ကျော်လွှားနိုင်မယ် စသဖြင့်ပေါ့ “
” ဟုတ် အကို ။ ကျွန်တော် သေချာ ပြန်စဉ်းစားမယ် ။ ပြီးရင် အကိုနဲ့ ပြန်လာတိုင်ပင်မယ်နော် အကို ။ “
” အေးပါ ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အကို အခုကတည်းက ကြိုပြီး တစ်ခုတော့ ပြောထားချင်တယ် ။ အကို ဟာ ညီ့ကို ဖြစ်တန်ချေတွေ ဖြစ်နိုင်ချေတွေကို အကြံပေးနေတာ သက်သက်ပဲ ။ ညီ့ အစား ဘာမှ ဝင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရဘူးနော် ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ညီ့ ဘဝ အနာဂတ် အတွက် ဆုံးဖြတ်သူဟာ ညီ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်ရမယ် ။ မိဘ ၊ ဆွေမျိုး ၊ ဆရာသမား တွေ ကစလို့ သူငယ်ချင်း အဆုံး ဘယ်သူမှ မဖြစ်သင့်ဘူး ။ ညီ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်သင့်တယ် ။ ဒါလေးတော့ ခေါင်းထဲမှာ သေချာလေး ထည့်ထား ။
မိဘ ၊ ဆရာသမားတွေ ဆီက အကြံဉာဏ်တောင်းရမယ် ။ သူတို့က ကိုယ့်ထက် ပညာဉာဏ် ဒါမှမဟုတ် ဘဝ အတွေ့အကြုံ ပိုပြီးရှိတာကိုး ။ သူတို့ဆီက အမြင်တွေကို ယူသင့်တာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် ဆုံးဖြတ်တဲ့ အခါတော့ ကိုယ်တိုင် ပဲ သေသေချာချာ ဆုံးဖြတ်ရမှာပဲ ။ အကို့ ကိုလည်း အားမကိုးနဲ့ ။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး အားမကိုးလိုက်နဲ့ ။ ကိုယ့် ဘဝ အခြေအနေကို ကိုယ်ပဲ ရင်ဆိုင် ဖန်တီးရမှာ ။ တခြားလူတွေကလည်း သူတို့ ဘဝနဲ့ သူတို့ ရှိနေကြမှာ ။ အဲဒါလေးတော့ ခေါင်းထဲ ထည့်ထား ညီ ။ “
” ဟုတ် အကို ကျွန်တော် ကြိုးစားကြည့်ပါမယ် ။ “
“ ဟ ငါ့ညီ စေတနာနဲ့ တစ်ခု ထပ်ပြောလိုက်ဦးမယ် ။ မင်း အဲ့ လေသံကို ပြင်ဦးဟ ကြိုးစားကြည့်ပါမယ် မဟုတ်ဘူး ။ ” ကြိုးစား မယ် ” ဒါပဲ ။ ကြိုးစားကြည့်ပါမယ် ဆိုတဲ့လေသံက ပျော့နေတယ်။ စမ်းလုပ် ကြည့်မယ် ။ မရ ရင် ရူးချင်ယောင် ဆောင်ပြီး လက်လျှော့လိုက်မယ် ဆိုတာမျိုး လေသံ ပေါက်နေတယ် ။ ဒီ အတိုင်းအလကားနီးပါး ရနေတဲ့ လေတောင် ပျော့နေရင် တကယ် လက်တွေ့ လုပ်တဲ့အခါ အခက်အခဲအဟန့်အတားတွေနဲ့ တကယ် နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ကြုံလာရင် မင်းဘယ်လို လုပ်မလဲ ? လေသံကို မာထား လိုက် … ကျွန်တော် ကြိုးစားမယ် ။ ဒါပဲ ။ “
ညီ လွင် တစ်ယောက် ကျွန်တော့်ကို မျက်လုံးပြူးကြည့်ရင်း ရယ်ပါတယ် ။
” ဟား ဟား ဟား … အင်း ပါ အကိုရာ ။ ကျွန်တော် အကို ပြောဖူးတာကို မေ့သွားလို့ပါ ။ အိုကေ ။ ကျွန်တော်ပြန်ပြင် လိုက်မယ် ။ ကျွန်တော် ကြိုးစားမယ် အကို ။ ဒါပဲ ။ ကျွန်တော် မရ ရအောင်ကြိုးစားမယ် ။ “
” အေး အဲလို လုပ်စမ်းပါဟ ငါ့ညီ ရ “
ကျွန်တော်လည်း သူ့စကားကို အားရဝမ်းသာ ထောက်ခံအားပေးလိုက်မိပါတယ် ။ သူ့ မျက်လုံးတွေမှာလည်း မျှော်လင့်ချက် အရောင် တစ်ချို့ တွေ့နေမိတယ် ။ သူ့ အတွက် တစ်ခုခု ပေးနိုင်လိုက်ပြီလို့ ယုံကြည်လို့ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်လည်း ကျေနပ်နေမိတယ် ။
တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်တော်တို့ တွေဟာ ကိုယ် စိတ်ချမ်းသာရာ ပျော်ရာကို လုပ်နေရ မှ ဘဝမှာ ရှင်သန်ရတာ အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ ခံစားနေရမြဲ မဟုတ်လားဗျာ ။